Tanànan'ny masoandro voalohany any Amerika, Babcock Ranch | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | tontolo iainana, Angovo Solar Photovoltaic, Trano maintso
Badcok Ranch, any Etazonia, miaraka amin'ny teny filamatra "Tsy mitovy ny tanàna rehetra" ny tanàna voalohany manao ahoana izany mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny 100% ny fahafahany.
Azonao atao ve ny lasa ilay tanànan'ny masoandro maro amintsika no maniry mafy izany?
Raha ny voalazan'ny tetikasa dia ny zavatra azo antoka indrindra dia raha mahomby, ankoatr'izay Badcok Ranch dia tsy miankina fotsiny amin'ny maha tanàna masoandro azy ary tsy misy zavatra hafa ankoatr'izay tanàna tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana na bisikileta, hoy i Kitson & Partners, maso ivoho misahana trano sy trano mampiroborobo ity tetikasa ity any atsimo andrefan'ny Florida.
Ny antony mametraka azy ho tanàna masoandro voalohany na fantatra amin'ny anarana hoe tanàna maharitra dia tsy ampy ary izany no izy Florida Hery sy Fahazavana, orinasa mpiara-miasa izay manana ny fanohanan'ny State of Florida sy ny County, hanangana orinasa mpamokatra masoandro amin'ny faritra izay heverinao fa mamatsy ireo trano 19.500 XNUMX avy amin'ny tanàna.
Ity zavamaniry masoandro ity, manana angovo hatramin'ny 75 MW, izay mitovy amin'ny a fametrahana tontonana masoandro 340.000, hanome ny angovo ilaina mandritra ny andro any amin'ny Babcock Ranch izy ireo.
Na izany aza, mandritra andro na alina be rahona, tsy maintsy mitoby ny tanàna gazy voajanahary. Efa fantatro fa misy saka mihidy eto!
Araka ny filazan'ny mpanentana, ny fampiasana gazy voajanahary mandritra ny andro sy ny alina ho fepetra vonjimaika izany, satria manantena izy ireo fa ny Babcock Ranch dia ho lasa karazana "laboratoara" amin'ny tena fiainana mba hahafahany manao mankasitraka ny fandrosoana amin'ny fikarohana toy ny ohatra amin'ny fitehirizana angovo avy amin'ny masoandro.
Teboka iray hafa tokony hodinihina ity tanànan'ny masoandro ity izay manome toky hanome "fiainana maharitra tanteraka" ny fahombiazan'ny angovo ny trano, manome takelaka insulated hafanana, voamarina mazava ho azy, avy amin'ny Florida Green Building Coalitio.
Tsy ny fametrahana angovo azo havaozina irery no vahaolana raha tsy hainao ny manararaotra an'io angovo io na amin'ny tranga ratsy indrindra avelao izy "handositra".
1 Ny tanana
Ankehitriny, raha mijery avy any ivelany ka hatrany anatiny isika dia afaka milaza izany Ny tanànan'ny masoandro dia manana lalan'ny natiora mihoatra ny 80 km, miampy a zaridainam-pokonolona amin'ny alàlan'ny manodidina sy ny arabe manodidina, ka mampiroborobo ny fifampiraharahana eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina, singa iray hafa amin'ireo singa tsy azo diso an'ny Babcock Ranch ao amin'ny taratasiny.
Izany dia nilaza, ny atin'ny hifantoka amin'ny maodely an'ny Founder's Square ny tanàna izay handrakotra ny filan'ny mponina rehetra afovoan-tanàna (afovoan-tanàna) izay hanana trano fisakafoanana, kafe, fivarotana sy toerana fialamboly ary Wi-Fi maimaim-poana.
Ny fampiasana ny bisikileta na dia mety ho azo atao aza ny manana marobe teboka fanarenana mampandroso fiara elektrika.
Ho an'ny fitateram-bahoaka mila maka sary an-tsaina kely amin'ny sarimihetsika foronina ianao satria herinaratra no ampiasainy, hatreto, saingy ho mahaleo tena sy tsy misy mpamily tanteraka izy ireo.
Tsy ny zavatra rehetra eto amin'ny tanànan'ny masoandro dia rosy, ny vondrona South Florida Widlands dia mifanohitra amin'ny tanànan'ny ho avy noho ny antony azo arovana tokoa hatramin'ny hisy fiantraikany amin'ny bibilava, orsa mainty, zanatany pantera ary mpanao vatan-kazo ny fanamboarana izay mipetraka eo akaiky eo.
Miaro tena ireo mpanentana amin'ny alàlan'ny fiantohana fa farafaharatsiny 295 km2 no hotehirizina ary ny tanàna dia honenana latsaky ny 73 km2 izay i South Florida Widlands no miatrika izany hevitra izany ny tetikasa dia hisy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina amin'ny ivon-toeram-pivarotana vaovao sy fitaovana hafa, milaza fa hataon'izy ireo mora tohina kokoa aza ny toerana mifanila aminy amin'ny fanatrarana azy ireo zorony ny panthers, hita ao amin'ny Loza mety maty.
Raha "mitsatsaka orana" ny tsikera ataon'ny mpanohitra sy ny mpanentana dia miaro tena izy ireo, ny tanàna dia mandroso hatrany amin'ny fananganana azy ary tsy ho ela dia ho azo atao ny mifanila vodirindrina amin'ity vondrom-piarahamonina ity raha mbola manodidina ny 300.000 750.000 $ - XNUMX XNUMX $ ao amin'ny poketranao.
Io rehefa miditra ny olana izay iarovan'ny mpiaro rehetra, ny ekolojia, ny tontolo iainana na ny olona miahiahy ny tontolo iainana.
Aringano ny ampahany amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny olana rehetra aterak'izany amin'ny fananganana tanàna maharitra hitehirizana ny tontolo iainana.
Mahafoy zavatra vitsivitsy ho an'ny "soa iraisana" ve isika sa mijanona tsy mijanona?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Tanànan'ny masoandro voalohany any Amerika, Babcock Ranch
osmar dia hoy izy:
Ny zavatra entona voajanahary dia ny orinasa hafa. Inona ny fampahalalana tsara, lahatsoratra tsara.
Valiny tamin'i Osmar
Misaotra betsaka anao Osmar, fahafinaretana ny mampahafantatra anao izay vaovao rehetra mipoitra avy amin'ny angovo azo havaozina.